विराटनगर । इन्द्रमोहन स्मृति गुठीले दुई-दुई वर्षमा प्रदान गर्ने साहित्य, कला र पत्रकारिता तर्फको पुरस्कारबाट तीन स्रष्टालाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाली साहित्यको कविता विधामा चार दशक बढी समयदेखि योगदान दिएका कवि विश्वविमोहन श्रेष्ठलाई डा.विमला श्रेष्ठ स्रष्टा पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ । हाल गुठीका प्रमुख संरक्षक समेत रहेकी डा विमला श्रेष्ठको नामबाट यो पुरस्कार दिन लागिएको हो ।
गीत संगीततर्फको ओम इन्द्रमोहन स्मृति पुरस्कारबाट प्रसिद्ध गायिका देविका वन्दना पुरस्कृत हुने भएकी छिन् । ‘यस्तै रहेछ यहाँको चलन....’ लगायत विभिन्न सयौं गीतबाट ख्याति कमाएकी बन्दनाले गीत संगीतका क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी समय योगदान पुर्‍याएकी छन् । यस अघि गीत संगीत तर्फको पुरस्कारबाट फत्तेमान राजभण्डारी, गणेश रसिक, कुवेर राई, यादव खरेल, दिप श्रेष्ठ, श्रीकृष्ण जोशी, लक्ष्मीकृष्ण श्रेष्ठलगायत पुरस्कृत भएका छन् ।
यसैगरी, ओम इन्द्रमोहन स्मृति पत्रकारिता पुरस्कारबाट दुई दशक बढी समयदेखि श्रमजीवि पत्रकारको रुपमा क्रियाशील पत्रकार रमेशचन्द्र अधिकारीलाई पुरस्कृत गरिने छ । कान्तिपुर दैनिकमा धनकुटाबाट समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएका अधिकारी पत्रकारिता सँगै गीत तथा साहित्यमा समेत क्रियाशील छन् । तीन वटै पुरस्कार आगामी पौषको दोस्रो साता विराटनगरमा विशेष समारोह बीच प्रदान गरिने जनाईएको छ । पुरस्कारको राशी जनही १५ हजार ५ सय ५५ र ताम्रपत्र रहने छ ।
गुठीले यस अघि सो पत्रकारिता पुरस्कार लीलाबल्लभ घिमिरे, अञ्जना ताम्ली, लगायतलाई प्रदान गरेको थियो । वि.सं.२०६२ सालमा कलाकार तथा समाजसेवी ओमकार श्रेष्ठले आफ्ना बाबु-आमाको नामबाट धनकुटामा गुठीको स्थापना गरेका हुन् ।
गुठीका संस्थापक श्रेष्ठको गत वर्ष मात्र निधन भएको हो ।
नाम मात्र बक्सअफिस, रिपोर्टका लागि वितरककै भर !
घटस्थापनादेखि देशव्यापी रिलिज भएको ‘छक्का पञ्जा ३’ ले सुरुवातदेखि बक्सअफिसमा गतिलो व्यापार गर्‍यो  । तर कति गर्‍यो ? कतिकति ! चल ...
राजेन्द्रका शब्दमा निश्चलको स्वर एवम् संगीत !
निश्चल घिमिरेको स्वर र संगीत रहेको सिडिएल्वम ‘‘गाजलीलाई आज हेरेर टोलाएँ’ बुधबार सार्वजनिक गरिएको छ । गजलकार राजेन्द्र घिमिरे 'सागर ...
गीतकार लेख कार्कीकाे गुंडैकाे चरी उडेर बांसैमा
चर्चित गीतकार तथा गजलकार लेख कार्कीकाे शब्द रहेकाे गीत "गुडैकाे चरी"डिअार अटुकाे कर्णप्रिय संगीत रहेकाे याे गीतमा गायक म ...